Voice from Eyewitness
ကြည့်မြင်တိုင် ဗားဂရာကျောင်းတိုက် နားသို့ သံဃာတော်များ နှင့် လူထုကြီးက ရောက်ရှိ ချီတတ်နေကြပါတယ်။ အခု လက်ရှိတွင် အခြေခံ ပညာ ဦးစီးဌာန(၃) (ယခင် RC-3) ကျောင်းနားသို့ ရောက်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓ အာဇာနည် သံဃာတော် အပါး ၂၀၀ ခန့် ရွှေဂုံတိုင်တွင် လမ်းလျှောက်နေကြပါတယ်။ သူတို့နောက်မှာ စစ်ကား ၂ စီး သေနတ်များဖြင့် ချိန်၍ လိုက်နေကြပါတယ်။
မတင်ချင်ပေမယ့်လဲ တင်ရပါတော့မယ်၊ ဗဟန်းဘက်မှာ ရိုက်နေကြပြီဆိုသော သတင်းကို အတည်ပြုပါတယ်။ မျက်မြင်တွေက ပြောပါတယ်။ ကြားတောရလမ်းဘက်မှ လူတွေဝိုင်းထားတဲ့ကြားက အရိုင်းအစိုင်း စစ်ခွေးတွေဟာ သံဃာတော်တွေ၊ သီလရှင်တွေကို ၀င်ရိုက်နေပါတယ်။ အနီးမှာရှိတဲ့ ဆိုင်တွေ၊ ကားတွေကို မှန်တွေခွဲ၊ ရိုက်နှက်တာတွေကို စစ်ခွေး တစ်စုက လုပ်နေကြပါပြီ။
နေအိမ်သို့ ည ၁ နာရီခန့်က ဝင်ရောက် ရှာဖွေပြီး ဓာတ်ပုံများ၊ တယ်လီဖုန်းတို့ကို သိမ်းဆည်းကာ ဖမ်းဆီးခြင်း ဖြစ်သည်။ ကိုကျော်သူက ထွက်ပြေးနေရသည်ဟု သတင်းရရှိပါသည်။
သတင်းများ မျိုးစုံ ထွက်နေသည်။ ကြားနေရသည်။ သို့သော် အတည် ပြုနိုင်သော သတင်းသာ တင်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
ပြည်သူများက နအဖက ဖြိုခွင်းမည်၊ ဖမ်းဆီးမည်ဟု ကြံစည် လုပ်ကိုင်နေသော်လည်း ဆက်လက်ဆန္ဒပြသွားနိုင်ရန် လူများ စတင်စုဝေးနေကြပါပြီ။
ဘုန်းဘုန်းတွေကလည်း တကယ်လို့ မတရားဖမ်းဆီးတာတွေ လုပ်ရင် အားလုံး ရဲစခန်းတွေ၊ ထောင်တွေကို သွားပြီး အဖမ်းခံကြမယ်လို့ ပြောနေကြပါတယ် ... ခင်ဗျာ။
ရန်ကုန်တွင် ရက်ပေါင်း ၆၀ ည ၉ နာရီ မှ မနက် ၅ နာရီအထိ ညမထွက်ရ အမိန့်ကြေငြာထားပါသည်။
http://new.petitiononline.com/9848/petition-sign.html <---- what's abt this? bro!
http://www.abc.net.au/news/stories/2007/09/26/2043351.htm <----- it's an announces from international news
26 September 2007 at 05:54
Dear brothers and sisters in Burma,
I support you in your struggle for freedom and democracy. I am urging my government to act. Please know that you have the majory of the international community behind you in your struggle.
The Prayers of all faiths are with you ande for you.
You are serving as an inpiration for all peoples of all lands
The Prayers of all peoples, of all faiths, of all lands are with you. You are an inspiration to all of the world.
I can only echo what Andrew has said. I and many other Americans are urging our government to take stronger actions on your behalf. Please keep your faith that the flow of history is with you and that through your struggles you will succeed. Our prayers, hopes and thanks are with you.
I pray to the infinite consciousness to solve the situation in Burma.
Tell the Burma monks and nuns to come together and march directly into the military. Tell the population to shield them. This is what Gandhi did. This was the defining moment. March right at the guns, then peacefully take the guns from them. The first few rows will die. The rest will see the new order come about. If enough keep coming, and refuse to back down, the divinity within the soldiers will rise to the fore in identification. They will surrender their guns. I would lead the way if I were there. Ask Oprah Winnfrey to come, and many others from America, and lead the way.